07 June 2013 Twi Online
Friday Sermon: Humility: A pre-requisite for patience and prayers - 7th June 2013 - Ashanti Twi Translation.
ƐFIADA NYAMESƐM: Ɔsanaa Bosome da a ɛtͻ so 7, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon 7th June 2013 – Ashanti Twi Translation)
AHOBRASEƐ: DEƐ EDI ABOTERƐ NE ASƆREYƆ MU AKOTENE.
“Na monfa aboterɛ ne Asͻreyͻ nhwehwɛ mmoa; na ampa ara sɛ saa adeɛ yi yɛ den gyesɛ wͻnom a wͻwͻ honhom mu ahobraseɛ. Nkurͻfoͻ no a wͻnim pefee sɛ wͻbɛhyia wͻn Awurade no, na wͻn adwene da so sɛ Ne nkyɛn na wͻbɛsan akͻ no” (2: 46-47).
Ansa na yɛbɛnya honhom mu ahobanbͻ no, nsɛmpͻ titire a saa kyɛfa yi, ne deɛ ɛka ho bi wͻ Kur’aan no mu, twe y’adwene kͻ ahobraseɛ so. Fapem a ɛwͻ mmra a yɛbɛtumi abɛn Nyankopͻn no yɛ ahobraseɛ. Anaa sɛ yɛbɛtumi aka sɛ, sɛ yɛdi Nyankopͻn mmra so a, eboa ma yɛnya ahobraseɛ, na saa suban wei na edua ogyidin mu wͻ aberɛ a ͻbɛdi Nyankopͻn mmra nsɛm no so.
Yɛkae “Na ɛma wͻn ahobraseɛ no kͻ soro” (17:110), Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no aka sɛ, Nyankopͻn asɛm no boa ma ahobraseɛ ne ahodwoͻ tena wͻn mu. Sɛ ogyidini ka sɛ, ͻgye Nyame di na ͻkan Nyame asɛm na ͻka sɛ ͻde bͻ ne bra a, wei ntumi nwie pɛyͻ mma no, gyesɛ ͻyɛ ahobraseɛ na ͻsan wͻ tema anaa sɛ, sɛ ͻwͻ ahobraseɛ mpo a, ɛwͻ sɛ ne suban ne ne Nyamesom kͻ nkan na ɛsan di mu. Nyame akͻmhyɛfoͻ aba Ewiase abɛka saa botaeɛ wei na wͻsan da wͻn subanpa no adi de ɛno di yɛn anim. Ɛwͻ akͻmhyɛfoͻ nyinaa mu no, nhwɛsoͻ a ɛdi mu yɛ Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no abrabͻ pa ne nhwɛsoͻdeɛ a ͻde gyae yɛn no.
Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no aka sɛ, Nyankopͻn Kokroko No yɛ Mmͻborͻhufoͻ ne Abadaeɛfoͻ daa. Ɔhwɛ nipa so wͻ akwan biara so na Ɔsan nso hu no mmͻbͻ. Ɛyɛ Ne mmͻborͻhunu nti na Ɔsomaa N’akͻmhyɛfoͻ ne N’asomafoͻ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wͻ bɛgye nipa afiri bͻne a ɛwͻ Ewiase yi mu. Ahomasoͻ yɛ ͻhaw a ɛyɛ hu paa yie. Ɛde sunsum mu wuo ba nipa a ɛte ne mu no. Menim yie sɛ, saa ͻhaw yi so sene awudie. Ahomasoͻni biara bɛyɛ Ɔbonsam nua ɛfiri sɛ ɛyɛ ahomasoͻ na ɛguu Ɔbonsam ɛnim ase no. Enti ɛyɛ asuadehunu ma ogyidini sɛ ͻnnya ahomasoͻ biara wͻ ne mu.
Deɛ ɛtͻ so biem, ɛwͻ sɛ ͻnya ahobraseɛ, abadaeɛ ne subanpa. Nyankopͻn akͻmhyɛfoͻ no nka wei ho, ɛfiri sɛ wͻn wͻ ahobraseɛ ne abadaeɛ soronko ɛsene nkaeɛ no na suban yi wͻ Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) mu. Obi busaa Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) n’akyidifoͻ no mu baako kwan korͻ a Ɔkͻmhyɛni (NNN) no de no faa so. Ɔbuaa sɛ, nokorɛ ne sɛ Ɔkͻmhyɛni (NNN) somm no sene deɛ n’akoa no somm no. “O! Allah hyira Muhammad ne Muhammad akyidifoͻ nyinaa na dom no nhyira ne ahobanbͻ. Wei ne suban a ɛyɛ nhwɛsoͻ ne ahobraseɛ. Ɛyɛ nokorɛ sɛ deɛ obi di akyire no mpɛm pii no ɛyɛ wͻn a wͻsom no a wͻwͻ nenkyɛn mmerɛ nyinaa no. Enti sɛ obi pɛ sɛ ͻhunu obi abadaeɛ, ahobraseɛ, fakyɛ ne nteaseɛ a, yɛbɛtumi ɛhunu wͻ ne mu (Nkyerɛaseɛ firi Malfuzat Vol.8, Pg.101).
Wei ne nhwɛsopa a ɛwͻ sɛ Muslimfoͻ no di akyire. Sɛ Kur’aan no hyɛ yɛn sɛ yɛndi Nyankopͻn mmra no so a, nhwɛsopa no da adi wͻ Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) mu. Yɛhwɛ ne som gyinaberɛ a, Nyankopͻn aka sɛ ͻnka sɛ ne som no yɛ Nyame dea na w’anhwehwɛ biribiara amma ne ho wͻ berɛ a ͻresom Nyame no. Wͻ Kur’aan mu no, Nyankopͻn ka sɛ “Ka sɛ, m’asͻreyͻ ne m’afͻrebͻ ne me nkwa ne me wuo nyinaa yɛ Allah dea, ewiase ahodoͻ no Awurade no (6:163). Edi mu ma no ba no sɛ, obiara ni hͻ gyesɛ Ɔkͻmhyɛni Kronkron Muhammad (NNN) na ͻtumi duruu hͻ. Nyankopͻn ka aboterɛ ho nsɛm. Na wͻmmfa saa adeɛ no mma obiara gyesɛ nkurͻfoͻ a wͻgyina pintinn, na wͻmmfa mma obiara ggyesɛ wͻnom a wͻwͻ kyɛfa kɛseɛ wͻ mudie mu (41:36).
Sɛ yɛkenkan wei fa Ɔkͻmhyɛni abrabͻ ho a, yɛhunu ne nhwɛsoͻ a ɛsene obiara ɛwͻ ͻhaw ne amaneɛ mu, amaneɛ ne ͻhaw a ͻno ankasa faa mu ne amaneɛ ne ͻhaw a kuro no yɛ de tiaa no. Ɔdaa aboterɛ soronko wͻ Taif, ɛsan gyee kuro no firi ͻsɛeɛ mu, mpo na Onyankopon ama no kwan sɛ ͻbɛsɛe kuro no. Deɛ ɛteɛ ne sɛ, mpo na w’adi dɛm no na atuturafoͻ a wͻwͻ Taif no, ͻkaa sɛ daabi da. Na wͻn ateetee no akyɛ, wͻ berɛ a ͻno ankasa akyidifoͻ ka kyerɛɛ no sɛ, ͻmbͻ mpaeɛ ntia nkurͻfoͻ kuo bi no, ͻbͻͻ mpaeɛ srɛɛ ahobanbͻ maa saa nkurͻfoͻ no na ͻka kyerɛɛ n’ekyidifoͻ no sɛ wͻnya aboterɛ, san kyerɛɛ wͻn sɛ, wͻn akatua nyɛ sɛ ͻbɛbͻ mpaeɛ atia wͻn, na mmom ͻbͻ mpaeɛ ma wͻn ahobanbͻ na wͻsan da aboterɛ soronko adi. Ɔkͻhyɛni (NNN) no ahobraseɛ nhwɛsoͻ yɛ adansedie wͻ kwan bi so.
Wei nti na Bͻhyɛ Messia (ANN) no ka sɛ, Yɛama yɛn nhwɛsoͻ pa a yɛbɛtumi abɛn Nyame Kokroko No. Ɛna Nyankopͻn ahyɛ yɛn sɛ yɛndi so na W’asan ama yɛn nkyerɛkyerɛ ahodoͻ na W’asan aka sɛ sɛ yɛdi so a yɛbɛbɛn No yie. Yɛhwɛ saa nkyerɛkyerɛ wei ne suban pa yi a, Nyankopͻn asan akyerɛ ɛho hia a ɛhia. Ansana yɛbɛbɛn No no, gyesɛ yɛnya ahobraseɛ ne aboterɛ. Yɛbɛtumi anya wei wͻ berɛ a yɛbɛdi suban pa a onipa no a, ͻka kyerɛɛ obi a na ͻhyɛ n’ase no sɛ ɛmma biribiara ɛnha no ɛfiri sɛ ͻno nso yɛ nipa te sɛ ͻnoara a ͻnom ne nna nufusuo na ne nna dii aduane korͻ yi ara na ͻsan bͻͻ bra te sɛ nipa kann ara.
Kyɛfa a me kenkan no kanee no kyerɛ sɛ yɛrefa ahobraseɛ ne ɛkwan a yɛbɛtumi abɛn Nyame. Y’aka sɛ ansa na yɛbɛbɛn Nyankopͻn no gyesɛ yɛnya ahobraseɛ soronko. Ɛno nna nkyɛn, obiara ntumi ni Nyankopͻn mmra so sɛ w’anhwehwɛ Nyame hͻ adom wͻ ahobraseɛ mu a. Nyankopͻn nkyerɛkyerɛ wͻ Kur’aan mu no kͻ ma ahyidifoͻ wͻ mmra no mu ne wͻn a w’atwa mu no abakͻsɛm. Biribiara a ɛwͻ Kur’aan no mu no yɛ afutusɛm ma agyidifoͻ. Enti atufo fa ahobraseɛ ɛne kwan a yɛbɛfa so abɛn Nyankopͻn. Gyesɛ yɛnya gyidie sɛ, “Na hwehwɛ mmoa” sɛ y’ante aseɛ a yɛrentumi nnyɛ ahoteefoͻ. Ɛne gyidie “Na hwehwɛ mmoa” fa abadaeɛ ne ahobraseɛ na ɛnam saa anisuadehunu a obi wͻ anaa ͻno ankasa suban ntumi mma obi nnya nhyira gyesɛ, Nyame hͻ nhyira na ɛyɛ Nyankopͻn hͻ adom ɛna ɛsan yɛ Nyame adom nkoa na ɛbɛtumi ama yɛn Ewiase ne yɛn wuo akyi abrabͻ a edi mu. Ɛwͻ sɛ yɛde ahobraseɛ bͻ mpaeɛ kyerɛ Nyankopͻn sɛ “O! Nyankopͻn fa W’ahummͻborͻ ne W’adom bra bɛboa yɛn na kyerɛ yɛn kwan a ɛsͻ W’ani na kyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so asom Wo ne aboterɛ a W’ani bɛsͻ. Y’aka sɛ, sɛ worehwehwɛ Nyankopͻn hͻ mmoa wͻ saa nhyira yi ho a, ɛnneɛ kyerɛ ahobraseɛ na to w’aboterɛ mu.
Kasapͻ “Sabr” (Arabic kasa a ɛgyina hͻ ma aboterɛ) ne sɛ wode gyidie bɛfa ͻyaw mu a wo nkasa ho. Sɛ w’ani bɛsͻ deɛ Nyankopͻn pɛ, na w’asͻ deɛ ɛbɛba w’akwan nyinaa mu. Sɛ obi bɛkuta na w’ada ne animuonyam adi ɛne gyidie a ͻwͻ wͻ Nyame mu wͻ tebea biara mu. Sɛ yɛbɛbͻ y’animuonyam anaa diberɛ ɛne yɛn gyidie a yɛwͻ wͻ Nyame mu ho ban wͻ kwan biara so, na y’atwe yɛn ho abata Onyankopͻn ho na y’anya gyidie wͻ Ne mu na y’anya aboterɛ wͻ Ne nkyerɛkyerɛ mu. Nyankopͻn aka sɛ, wei yɛ aboterɛ tebea sɛ yɛma y’ani kͻ ho a ɛbɛma yɛn anya Nyame hͻ nhyira. Nyankopͻn mpo nokorɛ gyidifoͻ dabiarada. Sɛ obi de ne werɛ hyɛ Nyankopͻn mu a, Nyankopͻn hyira saa aboterɛni no. Deɛ ɛteɛ biara no, aboterɛ nkyerɛ sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri ho. Na mmom ɛwͻ sɛ yɛma y’ani kͻ asͻreyͻ ho ɛna asͻreyͻ nso kyerɛ mpaebͻ, Nyame nkaekae, yɛdane y’ani hwɛ Nyankopͻn na yɛdane y’ani akyerɛ Ɔno nkoara wͻ ahobraseɛ mu na y’ahwehwɛ Ne hͻ adom.
Obi a ͻndwene ewiase ho bɛtumi ama n’ani akͻ asͻreyͻ ho, na obi a ͻndi ntrͻ anaa ͻnnyɛ ͻdaadaafoͻ. Obi a ͻnni saa abͻdin yi asͻreyͻ ndi mu. Nyankopͻn nhwɛ saa nnipa no. Nyankopͻn ani wͻ obi a ͻwͻ ahobraseɛ ne abadaeɛ ne deɛ ͻne Nyame di nkutaho. Mmerɛ a yɛwͻ mu no, Nyankopͻn ayi Bͻhyɛ Messia (ANN) no, na W’aka akyerɛ no sɛ, Ɔpɛ n’ahobraseɛ. Ɛnam saa ahobraseɛ yi so na ɛbue ɛkwan maa no tuu mpͻn no. Sɛ obi pɛ sɛ ͻyɛ wei a, na ͻpɛ sɛ ͻka aboterɛ aduaba no hwɛ a, na yɛ gye ne mpaebͻ tomu a, ɛnneɛ ɛho hia sɛ ͻdane n’ani hwɛ Nyankopͻn wͻ aboterɛ ne ahobraseɛ mu. Wei ne deɛ ɛbɛbͻ yɛn ho ban ɛfiri Ɔbonsam nsa mu. Na wei ne deɛ ɛbɛhyɛ yɛn gyidie mu kena na ama yɛn sunsum mu nkutahodie nso akͻ soro.
Ɛmma yɛn nndwene sɛ ansa na yɛbɛnya ahobraseɛ no ɛyɛ mmrɛ. Ɔhaw ne amaneɛ pii wͻ mu. Ewiase yi mu afɛɛfɛdeɛ ne adufudipɛ mma obi mbrɛ ne ho ase, sɛdeɛ kyɛfa no ka no “Wei yɛ den”. Ahobraseɛ yɛ adeɛ a ɛyɛ duru na ɛnda fͻm sɛ yɛbɛnya na afei nso neɛma pii si yɛn ho kwan firi ho. Ɛwͻ sɛ yɛkae sɛ Nyankopͻn pɛ sɛ Ne nkwa bɛda aboterɛ adi na wͻn bɛsom No yie wͻ deɛ ͻndwene biribiara ho gyesɛ Nyame nkoara. Afei nso, Ɔno ankasa aka sɛ, wei nyɛ mmrɛ na wo nsa ntumi nka wͻ berɛ a N’adom nka ho. Enti ɛwͻ sɛ obiara dane n’ani hwɛ Nyame na ͻhwehwɛ Ne hͻ adom, na wei nso bɛba mu wͻ berɛ a ͻkͻ Nyankopͻn nkyɛn wͻ ahobraseɛ mu ne gyidie mapa mu. Na Ɔno nkyɛn na wͻbɛkͻ.
Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) abrabͻ kronkron no, ɛnni ho kwan sɛ obi hwɛso de bͻ bra wͻ berɛ a ͻno ankasa pɛ. Na mmom, ɛwͻ sɛ yɛde bͻ bra ɛnam ne dͻ soronko a yɛwͻ ma no, ne ͻdͻ a ahyɛ y’akoma mu na yɛsua n’abrabͻ pa no. Wei ne tebea a ɛma ogyidini bɛyɛ ogyidini mapa. Ɛna Nyankopͻn aka sɛ obi a ͻdi saa nhyira yi so no ɛnneɛ Nyankopͻn bɛdͻ no na afei ͻbɛ nya anisoadehunu wͻ “Na Ne nkyɛn na wͻbɛsan akͻ” mu. Sɛ yɛbͻ mpaeɛ kyerɛ Nyankopͻn na yɛdwene sɛ Ɔwͻ tumi wͻ biribiara so na yɛnso yɛndwene deɛ ɛho nhia a yɛka ho na yɛpɛ sɛ Ɔtie yɛn mpaebͻ na Ɔdom yɛn ahobraseɛ dea, ɛnneɛ na yɛmmͻ mmͻden gyina pintinn wͻ y’aboterɛ ne y’asͻreyͻ mu. Yɛbͻ mpaeɛ kyerɛ Nyame sɛ Ɔnfa nkyɛ yɛn sɛ, yɛn mpaebͻ, yɛn brɛ anaa y’ahobraseɛ bɛyɛ basaa, saa dean a y’ahobraseɛ no daadaa yɛn. Yɛbͻ mpaeɛ sɛ yɛmfa yɛn nka wͻn a wͻwͻ ahobraseɛ a Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) aka sɛ ɛnam wͻn ahobraseɛ nti, Nyankopͻn ama wͻn so kͻ Ɔsoro ahenman a ɛtͻ so nson no mu.
Yɛbͻ mpaeɛ sɛ yɛbɛtumi abͻ bra wͻ kwan a Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) ne n’akyidini pɛ sɛ yɛtena no ɛna yɛn nso bɛtumi aduru baabi a Bͻhyɛ Messia (ANN) no de too hͻ maa ne Jama’at no. Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) aka sɛ, yɛn Jama’at no ma y’adwene mmra nsɛm a, sɛ obi wͻ bͻne ketewaa bi mu a, sɛdeɛ ɛsua no, ɛde nipa korͻ no kͻ bͻne kɛseɛ mu. Saa suban a ɛyɛ ͻhaw no nyinaa bɛyɛ onipa korͻ no suban na ɛbɛyɛ den sɛ ͻbɛgyae. Onipa a ͻyɛ ahobrasefoͻ na wͻnom nnya ahomasoͻ su a wͻbɛ yɛ ahomasoͻ. Obi ntumi nnyi saa adeɛ ɛnfiri hͻ gyesɛ saa nipa no dwene ne ho sɛ wͻsua wͻ Nyankopͻn kwan so. Kabir ɛka no nokorɛ mu sɛ: Ɛyɛ paa sɛ yɛwͻ fͻm na ɛwͻ sɛ yɛkyea yɛn ho. Sɛ anka yɛ woo yɛn wͻ gyinaberɛ a ɛkron so a, anka ɛbɛyɛ deɛn na y’ahunu Onyankopͻn. Ɛne sɛ, da Nyankopͻn ase sɛ yɛ woo yɛn wͻ abusua a wͻwͻ ahobraseɛ mu. Sɛ anka wͻwoo yɛn wͻ abusua a wͻwͻ sika mu a, anka yɛnhunu Nyankopͻn. Sɛ nkurͻfoͻ bi de wͻn nananom ahoahoa wͻn ho a, Kabir yɛ naasefoͻ ɛma ne baabi a wͻnom firi a ɛwͻ fͻm. Ɛwͻ sɛ nipa hunu ne ho sɛ ͻwͻ fͻm na ͻhunu ne ho sɛ ͻnyɛ obiara.
Sɛ obiara ɛmfa ho ne sɛdeɛ n’asefoͻ ɛnya ne su ne bi wͻ kwan bi so anaa foforͻ bi, na yɛnfa no sɛ ͻwͻ tema bi a, ɛnneɛ ɛkwan biara so no ͻbɛhunu ne ho sɛ ͻnyɛ obiara na ͻsan nso wͻ fͻm. Onipa ntumi ɛnya Onyankopͻn ahenman mu kwan gyesɛ ͻda suban pa bi adi kyerɛ mpaninfoͻ sɛ wͻyɛ mmaa anaasɛ wͻyɛ mmeema a wͻhia mmoa, sɛ ͻbɛyɛ anaa sɛ wͻbɛtrɛ mu akͻ nipa a ͻfiri abusua pa bi mu na gyesɛ wͻbͻ ne ho ban ɛfiri ahomasoͻ biara ho.
Ɛnsesaeɛ ketewaa bi bɛtumi asesa suban pa ama no abɛyɛ suban bͻne. Onyankopͻn abue ɛpono a ɛkͻ papa ho nkoara na ɛde ama N’abͻdeɛ na ɛno ne mpaebͻ. Sɛ obi wura saa pono wei mu na sɛ ͻresu srɛ Nyankopͻn a, Wͻde ahoteɛ kata ne so na Ɔdom no kɛseyͻ ma no kͻ ba sɛ ͻtwe ne ho firi ɛnoͻma biara a ɛho nhia ho. Adɛn nti na sɛ nipa gye Nyankopͻn di wie a, ͻntwe ne ho mfiri bͻne ho? Ampa ara sɛ, tebea bi wͻ nipa mu a ɛma yɛpo Nyankopͻn na ɛmma no ɛnnya gyidie a ɛwie pɛyͻ na ɛsan di mu. Anyɛ saa a, sɛ anka ͻnim sɛ Onyankopͻn wͻ tumi a anka Ɔbɛtumi de asɛe no prɛko pɛ a, anka ɛbɛyɛ deɛn na w’ayɛ bͻne? Hadith ka ma yɛte aseɛ sɛ, ͻkrͻmfoͻ biara nwia adeɛ wͻ aberɛ a ͻyɛ gyidini mapa na saa ara nso na ͻdwamamͻfoͻ biara nso mmͻ adwaman ɛwͻ ne gyidie mu. Ansaana obi bɛtumi atwe ne ho afiri adwene bͻne ho no, gyesɛ w’ahunu sɛ Onyankopͻn asotweɛ no te sɛ ayerɛmo a ɛsɛe te sɛ ogya. Saa aberɛ no na Onyankopͻn Kɛseyͻ no ba y’akoma mu.
Ɛne sɛ ɛnkwagyeɛ wͻ honhom mu nimdeɛ mu. Ɔdͻ mu yɛ den wͻ honhom mu. Enti ɛho hia paa yie sɛ yɛhunu wei wͻ honhom mu. Ɛnoͻma mienu a ɛma ͻdͻ mu yɛ den ne; ahoͻfɛ ne adom. Ɛbɛyɛ dɛen na obi adͻ obi a ͻnim n’ahoͻfɛ ne n’adom a ɛfiri Onyankopͻn hͻ? Ɛne sɛ Onyankopͻn ka sɛ “nanso wͻnnhyɛne ahenman turo no mu kͻpem sɛ yoma bɛwura panneɛ ani-tokuro mu (7:41). Ɛkyerɛ sɛ, atiafoͻ no ɛnwura ͻsoro ahenman no mu kͻsi sɛ yoma bɛwura panneɛ ani-tokuro mu. Animdifoͻ akyerɛ saa kyɛfa yi mu saa pɛpɛɛpɛ.
Me ka sɛ, deɛ ͻrehwehwɛ nkwagyeɛ no nni neho so. Ɛwͻ sɛ yɛtene yɛho ma no kͻ ba sɛ yɛbɛtumi awura panneɛ ani-tokuro no mu ɛwͻ honhom mu. Sɛdeɛ ewiase apɛdeɛ ne pɛsɛmenkomenya no ɛntumi ɛmfa Shariah mmra kwan ɛnkͻ ͻsoro ahenman mu no. Si wopͻ wͻ ewiase apɛdeɛ no kwan ho na suro Onyankopͻn na wei so na wobɛtumi afa so anya nkwagyeɛ wͻ awieɛ no na ɛbɛma wo akͻ ͻsoro ahenman mu (Nkyerɛaseɛ firi Malfuzat Vol.15, Pg.437-439).
Ma yɛn Jama’at ne Ahmadiyyani biara ɛnduru saa gyinaberɛ a ɛyɛ abadaeɛ ne ahobraseɛ, baabi a y’aboterɛ ɛyɛ ne yɛn Nyamesom nso yɛ na Ɔntie yɛn. Y’aboterɛ ne yɛn mpaebͻ so aba pa wͻ yɛn wuo akyi ne ewiase yi so wͻ kwan a ewiase no bɛhunu sɛ yɛyɛ Jama’at a Bͻhyɛ Mɛsia (ANN) no de aba. Jama’at a wͻn brɛ wͻn ho ase ma Nyame, yɛ wͻn asɛdeɛ som No, na wͻdi Ne nkyerɛkyerɛ no so wͻ ahobraseɛ mu. Ɛyɛ Jama’at a wͻhwehwɛ Nyame hͻ animonyam na wͻde aboterɛ ne mpaebͻ de nsesaeɛ ne nsakraeɛ bɛba ewiase. Ewiase no nhunu mmerɛ a ɛyɛ ͻhaw ne amanehunu. Ɛyɛ Nyame na Ɔwͻ tumi wͻ biribiara so na Ɔbɛtumi asɛe atamfo no ɛmfa ho ne akodeɛ a wͻwͻ. Berɛ a ewaise no bɛhunu wei no, ɛbɛma wͻn aka sɛ, wei ne agyidifoͻ kann a yɛbɛtumi ɛhunu Nyame ɛwͻ wͻn mu na wͻn anya Nyankopͻn hͻ dͻ. Wei ne nkurͻfoͻ a wͻbɛtumi akyerɛ ewiase akwan a yɛbɛtumi ahunu Nyame. Nyankopͻn ma yɛn nyinaa duru saa mpɛnpɛnsoͻ yi daa. Sɛdeɛ Bͻhyɛ Messia (ANN) no aka no, yɛn nyinaa mfa ahobraseɛ kwan so na yɛn to yɛn dͻ a yɛwͻ ma Nyame no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwagyeɛ wͻ yɛn wuo akyi.
Mo ma yɛmmͻ mpaeɛ mma Ahmadiyyafoͻ a wͻwͻ Pakistan, ɛfiri sɛ tebea a wͻwͻ mu no yɛ den. Nyankopͻn nto wͻn gyidie mu na Ɔndom wͻn wͻ sunsum mu nteaseɛ. Pakistan Ahmadiyyafoͻ nso mmͻ mpaeɛ ma wͻn ankasa gyidie sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wͻbɛnya gyidie nto mu. Nyame mma obiara ntumi mbɛn No. Amen!